Nyochaa SMS na-enweghị nnweta nnwale efu ekwentị
Etu esi ledoo SMS banyere nwa gi ma obu nwunye gi n’emegheghi ekwenti gi ka i we guo ederede ederede ka idebe ha ma obu choputa ihe ha mere.
Top 10 SMS Spy enweghị Nweta Target ekwentị Free Ikpe
Download free spyware na-enweghị emetụ lekwasịrị ekwentị ebe a.
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 8, 2021 nke Ian McEwan dere
Nsogbu, Mkpesa Na-eme ihere Mgbe ụfọdụ
Ị bụ nne ma obu nna isnye chọrọ nwa gị nwoke ihe na-eme? N'ihi na ị na-eche na ihe ọjọọ na-eme ụmụ gị, ma ọ bụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere nwa gị ka ọ dị mma ichebe ya ma ọ bụ ụwa ọjọọ a. Ma obu gi a di ma ọ bụ nwunye gbawara ụta onye choro ima ihe di gi ma obu nwunye gi n ’ime n’azu gi? Ma eleghi anya ị bụ onye were ya n'ọrụ onye na-agbagha iguzosi ike n'ihe nke onye ọrụ ị chere na ọ ga-eresị ndị ahịa gị ihe nzuzo gị dị oke egwu.
Kemgbe ugbu a, ndị mmadụ na - eji ekwentị eji ihe ọ bụla. Ọ bụrụ n’ị na-achọ ihe ngwọta, nnyocha na ozi ederede na ịnweta ozi ịchọrọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ. Taa n'isiokwu a, ka m kọọrọ gị ihe SMS inyocha na-enweghị ohere kwụsị ekwentị free ikpe.
Olee ka ndị nledo na Cell ekwentị enweghị wụnye akụrụngwa na iche na ekwentị
Enwere otutu ngwa nke na-ekwu na ha nwere ike iledo ekwentị na-enweghị ohere na ngwaọrụ. Eziokwu bụ na ole na ole, ma ọ bụrụ na ọ dị, ngwa na-ebi ndụ kwekọrọ na nkwupụta a. Ka a ghara iduhie gị ịzụta ngwa ndị a, ọkachasị ngwa ndị na-anaghị enye nnwale n'efu.
Yabụ, kedu sọftụ kacha mma nwere ike iledo ekwentị n’ejighi nweta ekwentị n’onweghị ule? N'ebe a, anyị nwetara a mkpokọta nnyocha ngwá ọrụ maka gị ka ị Nledo SMS na-enweghị ohere ka lekwasịrị ekwentị.
Ee. 1 SpyZie
SpyZie bụ otu n’ime usoro nyocha ekwentị kachasị dị elu ma jeekwa ozi karịa nde 3.5 nde mmadụ gburugburu ụwa.
Nnyocha Ozi: Ozi ederede, ozi WhatsApp, ozi. Instagram, Snapchat, Facebook, Skype, LINE, Viber, Kik, Tinder, WeChat, QQ, Hangouts, Telegram, wdg.
Remotely soro niile na-eme na android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ na Alert (data ehichapụ, SIM kaadị gbanwere, kpọmkwem kọntaktị, ma ọ bụ Keywords) na usoro iheomume.
Mbupụ ma budata data niile inyocha na PC akaụntụ akaụntụ gị.
Ọnwụnwa n'efu: Nkwụghachi zuru ezu n'ime ụbọchị 60 mgbe azụtara.
Nweta SpyZie ugbu a
Mụta otu esi ledoo SMS remotely na-enweghị emetụ ekwentị iche na SpyZie na vidiyo a.
Ee. 2 Ọkpụkpụ
Nke a bụ ngwa nke nwere ike ime karịa na-enyocha SMS. Ọ nwekwara ike na-arụ ọrụ dị ka GPS tracker na oku inyocha na WhatsApp wdg.
Ndakọrịta Cross-Platform: Android 2.3 Ka 9 + / iOS niile (iPhone / iPad).
ADGH root mgbọrọgwụ ma ọ bụ jailbreak.
Ọnwụnwa n'efu: Nkwụghachi zuru oke ọnụahịa ị kwụrụ maka ndenye aha gị n'ime ụbọchị 60.
Nweta CocoSpy maka Free Ugbu a
Maka ozi ọzọ: cocospy.com
Ee. 3 mSpy
mSpy - All na otu Chat ngwa Ndepụta Ngwá Ọrụ
Ndakọrịta Nkwado Ogwuregwu: Androiddị gam akporo dị elu karịa 2.3 / ụdị iOS niile.
Ọnwụnwa n'efu: Nkwụghachi zuru oke ọnụahịa ị kwụrụ maka ndenye aha gị n'ime ụbọchị 14.
Nweta mSpy ugbu a
Can nwere ike ịmụ ka SMS nnyocha na-arụ ọrụ na-enweghị lekwasịrị ekwentị ebe a na mSpy ngwa.
Maka ozi ọzọ: mSpy.com
Ee. 4 DataKit - Kacha mma nledo ngwa na-enweghị lekwasịrị ekwentị
Site na iji SMS Spy App oge niile, ị ga - enweta ozi naanị mgbe ị nwesịrị nnyocha, nke pụtara na ị na - efunahụ oke ma nwee ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ ọnwa iji nakọta ozi ma ọ bụ ihe akaebe ịchọrọ. Agbanyeghị, iji ekwentị data ngwá ọrụ dị ka Iweghachite DataKit iOS/Iweghachite Data Weghaara nwere ike inyere gị aka ledoo ozi ederede ehichapụ / dị / nke ga-eme n'ọdịnihu n'otu ntabi anya.
Ihe omume a na-enye a Oge ikpe 30 n'efu tupu ịzụrụ ya. Nwere ike ibudata ma wụnye ngwa ahụ na kọmputa gị, ma soro ntuziaka onscreen maka naghachi ozi na faịlụ ndị ọzọ si iCloud ngwaọrụ lekwasịrị, Nkwado iTunes, Nkwado Samsung Cloud, ma ọ bụ Ndabere Google Drive.
Budata DataKit iOS / gam akporo Data Recovery Free Ugbu a!
Datazụta DataKit iOS / Android Data Recovery Ugbu a!
Nledo na Ozi Ederede, Akụkọ Oku, Nweghachite, Foto, WhatsApp, SMS, Kọntaktị na ndị ọzọ site na iPhone ma ọ bụ ekwentị gam akporo na-enweghị ụbọchị 30.
Imeri DownloadMac DownloadImeri DownloadMac Download
N’ezie, enwere ohere bu na ike adighi agwu gi iru inweta ihe ichoro. Lee, m ga - egosi gị ọtụtụ ngwa nke nwere ike inyere aka.
Ee. 5 Nyochaa
Onye ama ama kariri mba 190+ ma jiri ihe karịrị otu nde mmadụ. Spyic bụ a smartphone nlekota ngwá ọrụ nwere ike inyere gị aka na-anya na ekwentị ọrụ nke onye ị hụrụ n'anya remotely.
Site na ahụmịhe afọ 10, Spyic nwere ike inyere gị aka soro oku, SMS, Ọnọdụ, Ozi Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Viber, akụkọ ntolite weebụsaịtị, wdg. Ọ na-enyekwa ọrụ nlekọta Geofence.
Ndakọrịta: Chọrọ gam akporo: 4.0.3 na elu / iOS niile
Ọnwụnwa n'efu: 60 ụbọchị ego-azụ nkwa.
Nweta Spyic Ugbu a
Maka ozi ọzọ: Spyic.com
Ee. 6 ClevGuard
Nke a bụ ileba anya na-eme ka ndị di na nwunye, nne na nna, ma ọ bụ ndị hụrụ ha n'anya nyochaa SMS, Kpọọ akụkọ ihe mere eme, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Nyere ndị ọrụ aka ichebe ndị ha hụrụ n'anya, chọpụta eziokwu, wepụ obi abụọ na mmekọrịta ahụ, ma mee ihe n'oge.
Enweghị ngwa echichi. Enweghị ịnweta iche na ekwentị.
Nyochaa ngwa data na iPhone na-enweghị jailbreaking.
Nlekota oru Windows PC, ekwentị gam akporo, iPhone, akaụntụ iCloud, akaụntụ WhatsApp.
Ndakọrịta: Chọrọ gam akporo: 4.0.3 na elu / iOS / Windows 10, 8, 7
Ọnwụnwa n'efu: 30-ụbọchị ego-azụ nkwa.
Nweta ClevGuard Ugbu a
Maka ozi ọzọ: ClevGuard.com
Ee. 7 UMobix
Nke a pụrụ iche ngwa ga-enyere gị soro ihe omume ọ bụla nke lekwasịrị ekwentị. A na-enyocha ozi, akụkọ ntanetị, nseta ihuenyo, akụkọ ihe mere eme WhatsApp ọbụna na nseta ihuenyo anya.
Ndakọrịta Cross-Platform: Android 2.3 Ka 4.x na n'elu / iOS (iPhone / iPad) 9 +
Free Trial: 14-ụbọchị ego-azụ nkwa.
Nweta uMobix Ugbu a
Maka ozi ọzọ: UMobix.com
Ee. 8 Chamspy
Na Chamspy, ị nwere ike:
Sochie Text Ozi enweghị ịnweta na ekwentị
Control égwu na Mmemme
Lelee Multimedia faịlụ
Ndakọrịta: Android, iOS, Windows na Mac.
Free Trial: 3-ụbọchị ego-azụ nkwa.
Nweta Chamspy Ugbu a
Maka ozi ọzọ: ChamSpy.com
Ee. 9 Spyera
atụmatụ: Oku ekwentị, SMS, WhatsApp, Facebook, Snapchat, na ozi IM ngwa.
Ndakọrịta Nkwado Ogwuregwu: Gam akporo, iPhone, iPad, Windows PC na Mac OS.
Ọnwụnwa n'efu: 10 ụbọchị ego azụ nkwa.
Nweta Spyera Ugbu a
You nwere ike ịmụ ka SMS nnyocha na-arụ ọrụ na-enweghị ekwentị iche ebe a na ngwa Spyera.
Maka ozi ọzọ: Spyera
Ee. 10 FlexiSpy
FlexiSpy bụ ihe ọzọ eji agagharị ngwa ngwa agagharị na America. Ọzọkwa, Ọ bụ otu n'ime ole na ole usable nnyocha ngwa nwere ike iji ma na iPhone na gam akporo. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịgba ọsọ na azụ, echela na mmadụ ị ga - eme nyocha ga-ama na ị na - eme nnyocha na ya.
Nweta FlexiSpy Ugbu a
You nwere ike ịmụ ka SMS nnyocha na-arụ ọrụ na-enweghị ekwentị iche ebe a na ngwa FlexiSpy.
Maka ozi ọzọ: Ngwa FlexiSpy
Cheta na: N'agbanyeghị nke ngwa ị na-eji, dịkwuo ohere nke ihe ịga nke ọma, ị ga-mma nwere nwe Apple / Samsung / Google ID na paswọọdụ tupu nnyocha. Ma ọ bụghị ya, ị kwesịrị iji passcode Unlocker iji nweta ọrụ ahụ.
Ekwentị Unlocker May nwere ike mkpa Mgbe Nnyocha na ndị ọzọ ndị mmadụ Mobile ekwentị mkpanaaka na
Y’obughi n’inweta ids na okwuntughe ndi ahu, inwere ike iji ya iPhone Passcode Unlocker (Pịa iji budata ikpe n'efu maka mmeri) iPhone Passcode Unlocker (Pịa iji budata ọnwụnwa maka mac) /Ihe Ntughari Android iji nweta ozi ahụ na ekwentị lekwasịrị anya na kọmputa ahụ.
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịnweghị ike ledo ngwaọrụ lekwasịrị anya ma ọ bụ na ịnwetaghị NJ / Samsung / Google ma ọ bụ nweta paswọọdụ Apple / Samsung, ma ọ bụ na ịnweghị ohere ịnweta ekwentị ahụ zube. Mgbe ahụ, ikwesiri iji usoro ọdịnala ndị ọzọ mee ihe. Iji maa atụ, kedu maka itinye ndị ọrụ nyocha? N'ezie, nsogbu bụ na ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị oke ọnụ karị, ma e jiri ya tụnyere ịzụta ngwa nzuzo.
Ndị mmadụ gụkwara:
Nledo na Text Ozi maka iPhone na gam akporo
Zọ Kachasị mma iji Ewepụ ekwentị gam akporo gị
Otu esi Kwado Mmepụta Mmepụta na ekwentị gam akporo
Esi mgbọrọgwụ gam akporo ekwentị na Tablet na iRoot